Mayelana ne-US - i-Etourism
SiyiNkampani Yezokuphatha i-Destination Management enikeza yonke imisebenzi yokuhamba e-Korea kwabokufika. Ilungu lethu leqembu lakhiwa ama-ejenti asemasha futhi anamandla asebenze, ngaphandle komlando wakhe omfushane, imicimbi ehlukahlukene, nemisebenzi. Sibambe iqhaza kuma-fairs ahlukahlukene wokuhamba emhlabeni wonke futhi sinobudlelwano obuhle nabalingani bethu bendawo emazweni angaphezu kwe-50.
Sisebenza ngokukhethekile ngezinsizakalo zabahambi abangamaSulumane, okuheha i-Korea hhayi abahambi baseMiddle East kuphela kodwa nabahambi abangamaSulumane abavela e-Asia.
I-Etourism izoqhubeka nokuba yisikhungo sokuhamba esihle futhi esinobungane ngokuzayo. Sizokwenza wonke umzamo odingekayo ukuletha isithombe esiziqhenyayo seKorea emhlabeni ngokuheha abokufika abaningi ngensizakalo engcono.
Ukulondolozwa kwezinhlobo zesintu ngokuhamba
Economic Uhlelo lokuvakasha olunekhwalithi enhle
Kuyajabulisa Uhlelo lokuvakasha olunomoya wokudala
Kuyathandeka Uhlelo lokuvakasha nokwaneliseka kwamakhasimende
Ukucebisa Uhlelo lokuvakasha ngokuhleleka kahle
KUNGANI UKHETHA I-ETOURISM
I-1. Ukuxhumana Komhlaba Wonke
Sihlinzeke insizakalo yethu yokuvakasha
Ngaphezulu kwamazwe aphesheya kwe-50 emhlabeni Kusukela ku-2012
I-2. Ukwaneliseka kwekhasimende
Incwadi evela emndenini waseSaudi Arabia Royal
Incwadi evela eMexico Goverment
I-3. Idumela elihle embonini yezokuvakasha yaseKorea
Imisebenzi Yeqhaza Komphakathi
Ukuthuthukisa Ukuphila Kwabakhubazekile: Abasebenzi be-Etourism bazinikele ekuthuthukiseni izimpilo zabantulayo ngokuletha amabriquette emasangweni abo angaphambili ngethemba lokuthi bazoba nobusika obufudumele.
Iminikelo Yabantu Abakhubazekile: NgoSuku Lwamazwe Ngamazwe Labantu Abakhubazekile, i-Etourism yanikela ngemali leyo esikhungweni sezempilo sendawo.
Iminikelo Yentuthuko Yentsha: I-Etourism iyavuma ukubaluleka kwentuthuko yentsha futhi yanikela ngemali eJeongdeok County ukusekela uhlelo lwemfundo.
Ilayisense / isitifiketi
KATA Amageyimu Wokuhamba Okuhamba phambili
Imiklomelo Yezokuvakasha Yomhlaba Wonke Yama-26
ISouth Korea's Leading DMC 2019
Ungqongqoshe Wezamasiko, Wezemidlalo Nezokuvakasha
Ukuqashelwa Njengomsebenzi Wabavakashi Abahle Kakhulu
ngu-KATA (Korea Association of Travel Agents)
Inqubomgomo Yesikweletu Sokuvakasha